Ciidamo Itoobiyaan ah oo weeraro lagula beegsaday deegaanka Yurkud.
Sunday April 12, 2020 - 10:56:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa wali weeraro laayaan ah kula kulmaya gobollo dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya xilli dagaalyahannada Al Shababa ay sare uqaadeen halganka ay kula jiraan shisheeyaha.
Habqanka Ciidamada Itoobiyaanka oo weli ku socdaalaya gobollada Gedo iyo Bay ayaa markale wajahaya weeraro dhiig bixin ah waxaana lasoo sheegayaa in lagaarsiiyay khasaara isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Maalintii shalay ciidamada Itoobiya oo maraya qeybo kamid ah gobolka Baay ayaa la kulmay ugu yaraan lix weerar oo labo kamid ah ay ahaayeen weeraro toos ah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiyaanka lagu galay inta u dhexaysa deegaanka Yurkud iyo degmada Bardaale oo katirsan gobollada Baay iyo Gedo, waxaana gaaray khasaare tiro badan oo isuga jira dhimasho iyo dhaawac.
Wariyaal ku sugan gobolka Baay ayaa soo sheegaya in qaraxyo is xigxigay lagu weeraray ciidamdaa Xabashida kadibna waxaa xigay weeraro jidgal ah, dad xoola dhaqata ah oo ku sugan deegaannada lagu dagaallamayo ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta qaraxyo waaweyn.
Ciidamada Itoobiya oo bishii Maarso kasoo tallaabay xuduud beenaadka ayaa dagaallo culus kula kulmay wadada xiriirisa degmooyinka Dooloow iyo Luuq ee gobolka Gedo, sidoo kale ciidamo gurmad ahaan uga baxay Baydhabo ayaa iyana weeraro culus lagula beegsaday deegaanka Awdiinle.